मतविभाजन गर्न प्रदेश १ को बैठक बस्दै, अब मुख्यमन्त्री को? — Sanchar Kendra
मतविभाजन गर्न प्रदेश १ को बैठक बस्दै, अब मुख्यमन्त्री को?
काठमाडाै‌ । प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमाथि आज मतविभाजन हुने भएको छ। आज मध्यान्ह १२:३० बजेका लागि प्रदेश सभा बैठक बोलाइएको छ।
नेकपा एमाले प्रदेश १ संसदीय दलका नेता आचार्य अल्पमतमा छन्। उनले विश्वासको मत जुटाउने सम्भावना कमजोर छ। प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी गठबन्धनबाटै नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छन्।
नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नयाँ मुख्यमन्त्रीमा राईलाई समर्थन गरिएको जानकारी दिए। विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री आचार्यले राखेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।
प्रदेश १ को प्रदेश सभामा ९२ सांसद छन्। मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत जुटाउन ४६ जना प्रदेश सभा सांसद चाहिन्छ।तर नेकपा एमालेसँग सभामुखसहित ४१ सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धन बहुमतमा देखिन्छ।
नेपाली कांग्रेसका २१ जना सांसद छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका १५ जना, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १० जना, जनता समाजवादीका ३ जना र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ जना सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन्।
साथै प्रदेश १ मा राप्रपाका १ जना सांसद छन्। यसअगाडि नै मुख्यमन्त्री आचार्यले राखेको विश्वासको मत प्रस्तावमा मतविभाजन गर्ने भनिए पनि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सभामुखलाई पत्र बुझाउँदै बैठक स्थगित गर्न माग गरेका थिए।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने बताइरहेको थियो। तर सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केन्द्रमा भएको निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्न प्रदेश १ का कांग्रेस सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए।